FFP2 / FFP3 KN95 Nkpuchi | China FFP2 / FFP3 KN95 nkpuchi Manufacturers, Suppliers
FFP3 Nkpuchi Nchedo na Valve Q7 （Ndị Na-abụghị Ahụike）
Ffp3 Masks En149 na Ffp3 Mask na Filter na-etu ọnụ maka ụdị ọdịdị, mpempe imi na-agbanwe, na loops ntị na-agbanwe agbanwe nke ọma na ntị gị. A nwalekwala ihe nkpuchi ọ bụla ma gosipụta igbochi ihe karịrị pasent 95 nke ahụ, dịka akara a si dị - ọ na-ekwukwa na ihe nkpuchi ahụ kwesịrị ịdị nke ọma n'ọtụtụ ụdị na nha ihu, ọ bụrụhaala na e nwere ebe 3.5 sentimita site na etiti imi na agba.
KN95 Ihu Nkpuchi 5-Layer breathable ustjá Nkpuchi Nkasi Obi Nchekwa Ahụ Ike Na-agbanwe Ntị Loops, Nza arụmọrụ
Disposable KN95 nkpuchi na KN95 nkpuchi reusable, mere nke elu-edu ihe onwunwe, mma, adụ, na ala. KN95 anyị bụ ihe nkpuchi na-enweghị ọgwụ, nke na-abụghị nke ịwa ahụ, akwadoro maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ojiji ndị nkịtị kwa ụbọchị. Ihe nkpuchi nwere 98% filtration ọnụego ma na-enye mgbochi nje na mgbochi uzuzu nchebe. 5 oyi akwa - onwe-inhalation nyo ụdị particulate respirator disposable. N'ụzọ dị irè, gbochie ihe ndị dị ka anwụrụ ọkụ, uzuzu, na pollen. Soft and kemeghi na-agbanwe earloops maka ọma daba adaba.
KN95 Ihu Nkpuchi 5-akwa akwa agba agba agba agba ume na nkasi obi nchekwa% 95, Nchekwa Egwuregwu ustjá Na-emegide PM2.5 - Na-ekpuchi Onwe Gị (Igwe Nkpuchi)
5 layer kn95 masks na Reusable Mask nke Kn 95 bụ ezigbo nhọrọ maka iji ụbọchị gị, ị nwere ike iji ya n'ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, ụgbọ njem ọha, n'okporo ámá obodo, nnukwu ụlọ ahịa. Nọgidenụ na-adịghị anya site na ájá, PM 2.5, haze, anwụrụ ọkụ, ụgbọala iyuzucha, wdg Na kn95 masks nchedo bendable imi clip bụ ofu na nkpuchi iji gbochie ihe ọ bụla ahụ si n'èzí. Odabara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụlọ ọ bụla, ọrụ ma ọ bụ nchebe njem.
Remụaka Reusable, Whable Facial Cotton Covering Facemụaka Ihu Ọta maka cgba ígwè na-eme njem n'èzí
A na-eji mkpuchi ihu ụmụaka mee ihe na ụmụaka 3 Layer Face Mask nke dị elu, akwa 3-oyi akwa 100% polyester nwere akwa dị nro na-enweghị akwa. Emere nkpuchi ọ bụla na akwa imi nwere ike ime ka ọ dị mma maka iji ụbọchị niile.
6 Layer Ọkachamara Ichedo ihu na agba agba agba Carbon
nke nwere ike iwepu ihe ugboro ugboro, ihe nkpuchi, ikuku ucha, ocha na odi nma iji. Ihe nkpuchi facisl na-echekwa ihu nke dị n’ime carbon na - arụ ọrụ nwere ike inyocha gas ma ọ bụ isi ọjọọ. KN95 na nhichapụ 95% filtration, a 360-ogo atọ akụkụ iku ume ohere ， nye na mgbochi ájá nchebe maka gị. Emere ya nke ihe di nma, odi nma, di nro ma di nma ， belata iwe iwe.
Hotodeal KN95 Nkpuchi Nche Mkpuchi Nkpuchi Ahụ Na-eku ume Na Mgbaze Na-eku ume
KN95 nkpuchi 5ply na kn95 masks disinfecting na-arụpụtara na a kpamkpam enweghị ájá na ọcha ogbako, na dum usoro na-kpọkọtara site akpaka igwe. Oru oru na-erube nnọọ soro chọrọ. Nkpuchi Earloop na Valve bụ nhọrọ dị mma iji yikwasị ya mgbe ị na-eme njem site na ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ ala, ụlọ ahịa, nnọkọ na n'okporo ámá obodo na-ekwo ekwo. na-echebe gị ka ájá, PM 2.5, anwansị, anwụrụ ọkụ, ụgbọala iyuzucha, wdg. Pack nke 20 masks iji izute gị na ezinụlọ gị / mkpara / ndị enyi 'chọrọ. ”
FFP3 Respirator Face Masks na-enweghị Exhalation Valve White 4 Point Headband na Cushioned Lining
Ihe nkpuchi ffp3 maka nchedo nje na CE En 149 FFP3 fechaa ihu ikuku ka eji akwa ocha ejiri di nma, ihe nkpuchi di nma ma sie ike, na-enye ihe omuma di nma, ihe di nro, odi nma, nchebe maka aru ihu na iku ume. ffp3 respirator mask High ọkwa 4 n'ígwé nyo nke kpara akpa nwere ezigbo ume na mfe ume na-ekpo ọkụ / iru mmiri gburugburu. A na-eji akwa dị nro mee ụdọ ntị nke na-adịghị emerụ ntị ntị ọbụlagodi na ọ ga-eyi ogologo oge. Ihe nkpuchi ffp3 a na vale ga-echekwa ọnụ gị site na ichebe uzuzu niile, ebe mmetọ ikuku, anwụrụ ọkụ, na ikuku aja. Ọ bụ mgbochi ájá ọbụna na-agbanwe ihu igwe.